Ajajawwan galmee kee keessatti wantawwan fooyyessu of keessaa qaba.
Wanta(wwan) filataman marsa.
Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.
Dirqaloota wantoota filataman jjjiiri.
Wantoota filataman wantoota biroo waliin walbira qabuun hiriirsa.
Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.
Wantoota filataman tokkoo fi tokkoo olii gara boca tokkottii maka.Tuutessu irraa bifaadda ta`een, wantootnii makamman amaloota wantoota tartiiba sadarka wantoota kessaa issa gaddii irraa jiran qabaatu. Wantoota makaman adda baasu dandessa, garu ammalootnii jalqaba wantootaa ni bada.
Wanta walitti makame gara tokkon tokkon wantootatti adda baasa.
Wantoota filatamman lamaa fi lamman olii irraa boca uumaa.
Sararoota lamaa fi lamaa olii qanyoota beeziyarii ykn wantoota bira sarara waliin walqabsisuun sarara ykn beziyaarii uuma. Wantootnii cufamanii fayiilii ofkessa qaban gara sararaattii jijjiiramuun gutamiinsa isaanii dhaabachuu danda`uu.
Saraarota ajaja waliindha sararotaan walittii hidhaman addaan qurxeessa.
Title is: Fooyyessi